အရှုံးမပေးပါနဲ့ … - Myanmar Spirit
Home / Aung Ko U - UMK / အရှုံးမပေးပါနဲ့ …
လက်လျှော့ အရှုံးပေးတဲ့သူတွေဟာ ဘယ်တော့မှ မအောင်မြင်သလို
အောင်မြင်တဲ့သူတွေဟာလည်း ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးကြဘူး …
ကျွန်တော် အရမ်းကို ကြိုက်မိတဲ့ စာတစ်ခုပါ …. လက်ရှိ ကျွန်တော့်သင်တန်းက နေ့လည်ဖက် စာဖတ်တန်းမှာ သင်နေတဲ့ John C. Maxwell ရဲ့101 Success စာအုပ်ထဲက စာသားတစ်ခုပါ။ လူတော်တော်များများ မအောင်မြင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုက လမ်းခုလတ်မှာ အရှုံးပေးသွားကြတာပဲ … လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ အခက်အခဲတွေ၊ အဆင်မပြေတာတွေ … ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကြုံလာတဲ့အခါ ပထမတစ်ဆင့် စိတ်ညစ်ပါတယ် … ပြီးရင် စိတ်ဓါတ်ကျလာပါတယ် … နောက်တော့ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်တွေ ပျောက်ဆုံးပြီးတော့ လက်လျှာ့ အရှုံးပေးပြီး လမ်းပျောက်သွားတတ်ကြပါတယ်။ John C. Maxwell ပြောတဲ့ စကားကို သက်သေပြနိုင်သူတွေ ကမ္ဘာမှာရော မြန်မာ မှာပါ အများကြီး ရှိပါတယ်။
လက်ရှိ ရွှေလောကမှာ နာမည်ရနေတဲ့ အောင်သမာဓိ တည်ထောင်သူ ဦးအောင်ဟာ ကွမ်းယာရောင်းတဲ့ ဘဝက ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်အထိ ဖြစ်လာတဲ့ ဘဝခရီးမှာ ပန်းမွေ့ယာ ရွှေကော်ဇောတွေ ဖြတ်ခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး … ၊ ထို့အတူ ILBC ကျောင်းတည်ထောင်သူ ဦးတင်မောင်ဝင်းဟာလည်းပဲ အခုချိန်မှာ မြန်မာပြည်အနှံကျောင်းခွဲပေါင်းများစွာ တည်ထောင်ပြီး စီးပွားထူးချွန်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် အခက်အခဲပေါင်းများစွာကို ဖြတ်ခဲ့ရတာပါ။ (အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ အကြောင်း အသေးစိတ်ကို Hub Myanmar က ထုတ်ဝေတဲ့ မြန်မာ့စီးပွားထူးချွန်သူများ စာအုပ်မှာ အသေးစိတ် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်)
ကျွန်တော့်ရဲ့ ကျေးဇူးရှင် ဆရာကြီး ဦးမြကြိုင်ကပြောပါတယ် …. “အခက်အခဲဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ခံနိုင်ရည်ကို စမ်းနေတာတဲ့” ဥပမာ - အသွားထက်တဲ့ ဓါးတစ်ချောင်းဖြစ်လာဖို့ မီးအပူပေးပြီး တူနဲ့ အထုခံရသလို မျိုးပေါ့ … မီးအပူပေးမခံ … အထုအရိုက်မခံဘဲနဲ့ ဓါးကောင်းကောင်းတစ်လက် မဖြစ်လာနိုင်ပါဘူး …
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း လုံးဝ ဆက်မလုပ်ချင်လောက်တဲ့ အထိ အခက်အခဲတွေ ကြုံခဲ့ဘူး ပါတယ် … ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် နှလုံးသွင်းထားတာ တစ်ခုရှိတယ် … အဆင်မပြေတာနဲ့ ကြုံတဲ့အခါ ကိုယ်က ချက်ချင်း သေသွားလို့မှမရတာ … လူလောကမှာ ရှင်သန်နေသရွေ့တော့ လုပ်စရာ ရှိတာ ဆက်လုပ်နေရာမှာပဲ … အဆင်ပြေလွယ်ကူတာတွေ တွေ့နိုင်သလို ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေ လည်း ကြုံရမှာ မလွဲမသွေပါပဲ … ခုချက်ချင်း ဖျိုးကနဲ ဖြတ်ကနဲ သေသွားရင်တော့ နားအေးပါတယ်။ မသေသွားနိုင်သေး တော့လည်း လုပ်စရာရှိတာကို ဆက်လုပ်ရတာပါပဲ … ။
အခု အချိန်မှာ ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲတွေ ဒုက္ခတွေဟာ အောင်မြင်လာတဲ့ တစ်နေ့မှာ လက်မထောင် ဂုဏ်ယူပြောရမယ့် အဖိုးတန် အတွေ့အကြုံတွေ ဖြစ်လာမှာပါ … အခုချိန်မှာတော့ အံကြိတ်ခံ ပြီးတော့ ဆက်ကြိုးစားပါ …. ကျွန်တော် ၂၀၁၀ မှာ ဘဝကို ပြန်စတဲ့ အခါ အလုပ်က ထွက်လိုက်တော့ ပိုက်ဆံလည်း မရှိ အကြွေးလည်းတင်၊ ဒီကြားထဲ ကျန်းမာရေးကမကောင်း … အဲဒီအခြေအနေက နေ ၈-ပေ ပတ်လည် အခန်းကျဉ်းထဲမှာ တစ်နေ့ကို ၄ နာရီပဲ အိပ်ပြီး ၃ နှစ်ဆက်တိုက် မနားမနေကြိုးစားခဲ့တာ … ၂၀၁၃ မှာ AELC ကို စတင်တည် ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ထမင်စား စားပွဲလို လေးထောင့် ခုံ ၂ လုံး ဆက်ပြီး ၄ လွှာ ဒါဘာ အခန်းကျဉ်းလေးက စခဲ့တဲ့ AELC ဟာ များပြားလာတဲ့ ကျောင်းသားဦးရေကြောင့် အခု ၂၀၁၆ မှာ ကျယ်ဝန်းသပ်ရပ်တဲ့ အခန်းနဲ့ တစ်ယောက် တစ်ခုံ Lecture Chair နဲ့ Projector, Sound System အစုံလင်နဲ့ အဆင့်မီတဲ့ စာသင်ခန်း တစ်ခု အထိ ပြောင်းလဲ လာနိုင်ခဲ့ပါပြီ … ဒါပေမယ့် အောင်ခြေကလာ တဲ့ သူတွေရဲ့ ဘဝကို စာနာလို့ သင်တန်းကို ပိုမိုသက်တောင့်် သက်တာနဲ့ အဆင်ပြေအောင် Facility တွေ တိုးထားပေမယ့် သင်တန်းကြေးကို တိုးမတောင်းပါဘူး … ။ ဒါတွေ ပြောနေတာဟာ ကိုယ်ရည်သွေးချင် လို့ မဟုတ်ပါ … အခက်အခဲကြားထဲမှာ ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးတော့ တိုးတက်လာမှု အတိုင်းအတာလေးကို မြင်သာ ထင်သာ ရှိစေချင်လို့ပါ … ။
ဒါကြောင့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရှုံးမပေးပါနဲ့ … “လက်လျှော့ အရှုံးပေးတဲ့သူတွေဟာ ဘယ်တော့မှ မအောင်မြင်သလို အောင်မြင်တဲ့သူတွေဟာလည်း ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးကြဘူး …” … ဒါလုံးဝ အမှန်တရားပါ … “Quitters never win and winners never quit.” ဒီစကားလေးအတိုင်းပဲ Winner တွေပဲ ဖြစ်ကြပါစေ … Quitter တွေ မဖြစ်ကြပါစေနဲ့ လို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ် …
Source => https://www.facebook.com/aungkouumk/posts/804944286299028